Ali and Nino ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
Ali & Nino (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ali & Nino ဆိုတဲ့ novel လေးကိုပြန်ရိုက်ထားတာပါမင်းသား Ali က မူစလင် မင်းသမီးက Nino က ခရစ်ယာန်
ဒါပေမယ့်Nino အဖေက သဘောမတူပါဘူး ??
သူငယ်ချင်းက သစ္စာဖောက်ပြီး မင်းသမီးကိုခိုးပြေးတော့ လူသတ်မိသွားပါတယ်…
အဲ့လိုနဲ့ Aliကခေတ္တရှောင်ပုန်းနေရင်း မင်းသမီးက မခွဲနိုင်တော့လိုက်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့….??
Relationship တစ်ခုမှာ နားလည်မှုကအဓိကကြမလား….❤❤
ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ကြတော့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုပေးဆပ်ကြရတယ်ဆိုတာလေး
စစ်ပွဲတွေကြား အချစ်တွေနဲ့ Romaticဆန်ဆန်လေး ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Romantic မို့ kissing sence လေးတွေလည်း နှစ်ခန်းလောက်ပါပါတယ်လို့??
သနားစရာလည်းကောင်းလို့မို့ မျက်ရည်လွယ်တဲ့သူဆို Tissue လေးတော့ဆောင်ထားပါလို့ ??
Translated by May Phyu Zin
Quality: 1080p WEBDL
Openload.co Myanmar850MB Download Openload.co Myanmar690MB Download Soliddrive.co Myanmar909MB Download Soliddrive.co Myanmar691MB Download
Trailer: Ali and Nino ( 2016 )